बलियो सिटी माथि चेल्सीको संघर्षपूर्ण जित !! १४ महिना पश्चात लुइजको गोल - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
बलियो सिटी माथि चेल्सीको संघर्षपूर्ण जित !! १४ महिना पश्चात लुइजको गोल
प्रकाशित मिति : आइतवार, मंसिर २३, २०७५
जारी प्रिमिएर लिग फुटबल म्याच डे १६ को भिडन्त ठुला टोली चेल्सी विरुद्ध म्यानचेस्टर सिटीमा चेल्सी २-० ले बिजयी भएको छ। सुरक्षित ३ अंकका निमित फ्रान्सका एन्गोलो कान्टे र ब्राजिलियन डेभिड लुइजले १,१ गोल गरेका थिए।
विश्व फुटबलमा बलियो र महँगो ११ रहेको म्यानचेस्टर सिटीले कुनै खेल नहारी १५ खेल खेलेको थियो भने जित यात्रालाई भंग गर्न चेल्सीले अट्याक र डिफेन्स दुवै खेल मिलायो। सिटीले खलको पहिलो हाफमा निकै सुनौला मौका गुमायो तर चेल्सीबाट कान्टेली हाजार्डले दिएको पासलाई सदुपयोग गर्दै पहिलो हाफमै अग्रता लियो।
दोस्रो हाफमा रेफ्रीले ठम्याउन नसक्दै चेल्सीलाई कर्नर दियो फलत कर्नर बलमा लुइजले गोलको दिशा प्रदान गरे र टिमलाई ठुलो जित दिलाए।
१४ महिना पश्चातको लुइजको पहिलो गोल हो। २ ठुला हार ब्यहोरेको चेल्सीले प्रिमिएर ल्लिग दाबेदार सिटीलाई हरायो। पेप ग्वाड़ीवालाको शक्तिशाली टिमले चेल्सीको घरेलु मैदानमा नमिठो हार व्यहोर्यो। स्टाम्फोर्ड ब्रिजमा भएको उक्त खेलमा सिटीले उच्च बल पोसेसन देखाएको थियो भने जित निकाल्न सकेन र चेल्सीले क्लिन सिट लिन सफल भयो।
यस खेलसंगै सिटी दोस्रो स्थानमा समेटिन पुगेको छ भने चेल्सीको मद्दतमा लिभरपूल पहिलो स्थानमा उक्लेको छ। लिभरपूलले ४२ अंक बटुलेको छ भने सिटीले ४१ र चेल्सीको मात्रै ३४ अंक रहेको छ। स्पर्सको खेल लेस्टर सिटीसंग छ जसको खेल पश्चात तेस्रो स्थान यो साता को रहने छुटिने छ।
आजै भएको खेलमा लिभरपूल र आर्सनल बिजयी भै सकेका छन्। आज मो.सलाहले ३ गोल गर्दै गोल कर्ताको अग्र स्थानमा बस्न सफल भएका छन।
chelseaenglish premier leagueManchester City
युरोपा लिगमा आज हुदै छ एकै दिन २४ खेल !! चेल्सी र आर्सनलको खेल पनि आजै
बुफन भन्छन, जुभे शक्तिशाली छ, उसंग भिड्ने रहर कसैको छैन !! आखिर किन ?
यस कारण ‘डेम्बेले’ क्लब छोड्न सक्ने !! कोचको प्रतिक्रिया यस्तो
च्याम्पियन लिगको फाइनल राउण्ड आज !! कसको भिडन्त कोसंग, समय तालिका सहित
फर्ममा रहेका चेल्सी स्टार ‘लुइज’ सित्तैमा क्लब छाड्ने !! आखिर किन ?
प्रिमिएर लिगका ठुला भिडन्त, कुन कुन समयमा हुने !! समय तालिका सहित